မိန်းကလေးများအတွက် ငှက်ပျောဖူးရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ – Daily Feed MM
မိန်းကလေးများအတွက် ငှက်ပျောဖူးရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
Admin_John | December 14, 2020 | Healthy | No Comments
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဆို မေမေက ငှက်ပျောဖူး မကြာခဏဆိုသလို ချက်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အသားနဲ့တောင်မလဲနိုင်ပါဘူး။ အခုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီမို့ ငှက်ပျောဖူး ကိုစားချင်တိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီ းပေးပြီး ဝ
ယ် စားနေရပြီပေါ့ရှင်။စာဖတ်သူတို့ကော ငှက်ပျောဖူးကို စားဖူးကြလား။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငှက်ပျောဖူးဟင်းလျာကို ထည့်သွင်းရောင်းချကြပါတယ်။ ငှက်ပျောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေကို အထူးတလည်မှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစား အစာတွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။ ဒီတော့ ငှက်ပျောဖူးစားတာ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ?
(1)သွေးအားနည်းရောဂါကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။(2)အစာအိမ်နာတာကို သက်သာစေပါတယ်။(3)ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက် လစဉ်ဓမ္မတာမှန်စေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု
ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဝမ်းချုပ်တာကိုလည်းလျှော့ကျစေပါတယ်။ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေလို့ သားအိမ်ကျတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သွေးတိုးလည်းကျစေပါတယ်။
ကြၽန္မငယ္ငယ္တုန္းကဆို ေမေမက ငွက္ေပ်ာဖူး မၾကာခဏဆိုသလို ခ်က္ေကြၽးေလ့ရွိပါတယ္။ သိပ္ကိုအရသာရွိၿပီး စားေကာင္းလြန္းလို႔ အသားနဲ႔ေတာင္မလဲႏိုင္ပါဘူး။ အခုေတာ့ အိမ္နဲ႔ေဝးေနတာၾကာၿပီမို႔ ငွက္ေပ်ာဖူး ကိုစားခ်င္တိုင္း ဆိုင္ေတြမွာ ေဈးႀကီ းေပးၿပီး ဝ
ယ္ စားေနရၿပီေပါ့ရွင္။စာဖတ္သူတို႔ေကာ ငွက္ေပ်ာဖူးကို စားဖူးၾကလား။ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ငွက္ေပ်ာဖူးဟင္းလ်ာကို ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာဖူး ဟာအရသာရွိ႐ုံသာမက က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါတယ္။
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ေဆးဝါးေတြကို အထူးတလည္မွီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ေန႔စဥ္စားသုံးေနတဲ့ အစား အစာေတြဟာ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံအရင္းအျမစ္ေတြပါပဲ။ ဒီေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူးစားတာ ဘယ္လို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိသလဲ?
(1)ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။(2)အစာအိမ္နာတာကို သက္သာေစပါတယ္။(3)ဆီးခ်ိဳေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြနဲ႔ ႏို႔တိုက္မိခင္ေတြအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လစဥ္ဓမၼတာမွန္ေစပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ
ကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ဝမ္းခ်ဳပ္တာကိုလည္းေလွ်ာ့က်ေစပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သားအိမ္ကိုလည္း ႀကံ့ခိုင္ေစလို႔ သားအိမ္က်တာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ေသြးတိုးလည္းက်ေစပါတယ္။
ဘိုးဘွားတွေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမည့် အိမ်တွင်းနည်း
ကွမ်းမဖြတ်နိုင်သူတွေအတွက် အသက်ရှည်ရှည်နဲ့ စားနိုင်မယ့် နည်းလေးပေးပါရစေ